Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း)
Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Glucosamine ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာအဆစ်နှင့် အရိုးနုပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာအခြားအသုံးပြုပုံတွေ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ သင့်ရဲ့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ အသေးစိတ် (သင်သုံးစွဲနေသောဆေးအမည်) ကိုဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Glucosamine ဟာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အရိုးနု ပြုလုပ်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သစ်စေးနဲ့ သဏ္ဍန်တူအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအရိုးနု ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုအားပေးပြီးတော့ အဆစ်ကိုပြုပြင်ပေးတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အရိုးနုတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့ ပျက်စီးခြင်းကိုတားမြစ်ပေးပါတယ်။
Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Glucosamine ကိုသင့်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏကိုအတိအကျသိရှိရန် ဆေးပေါ်ရှိအညွှန်းကိုသေချာဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
ထုပ်ပိုးမှုပေါ်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးဟာဆေးစွမ်းပြရန်အတွက် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာကနေလပေါင်းများစွာအထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ တစ်ရက် (သို့) တစ်ရက်ထက်ပိုပြီးဆေးသောက်ဖို့ မေ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန်ကသောက်ဖို့ ညွှန်ကြားတယ်ဆိုရင် နေ့တိုင်းသောက်ရန် သတိရဖို့ လိုပါတယ်။
Glucosamine ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲမသိဘူးဆိုရင် သင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Glucosamineကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Glucosamineကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Glucosamineဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
GlucosamineGlucosamineကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို
Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင့်မှာ Glucosamine နဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် သင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာဆရာဝန်ကိုပြောပြဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဝမ်းချုပ်၊ ဝမ်းလျှော၊ မူးမော်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုကး၊ ရင်ပူ၊ ပျို့အန၊ အစာအိမ် နာခြင်း၊
အောက်ဖေါ်ပြပါ ပြင်းထန် လက္ခဏာများရှိပါကအရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူပါ။
ပြင်းထန်သောဓါတ်မတည့်မှု လက္ခဏာများ (အနီကွက်၊ အဖုအပိန့်၊ ယားယံခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ ရင်ဘတ်ထဲတွင် တင်းကျပ်ကျပ်ဖြစ်နေခြင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်းနဲ့ လျှာ ရောင်ရမ်းခြင်း)
ဘယ်ဆေးတွေက Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Glucosamineဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
နှလုံးဆေး၊ အင်ဆူလင်၊ သွေးကျဲဆေးများနဲ့ ဆီးရွှင်ဆေးများသောက်သုံးနေသူများဟာGlucosamine မသောက်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Glucosamineက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Glucosamineဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်ဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် စိတ်ကူးရှိသူ၊ နို့တိုက်မိခင်၊ ဆေးညွှန်းဖြင့်ဖြစ်စေဆေးညွှန်းမပါပဲဖြစ်စေဆေးများသောက်သုံးနေသူ၊ အစားအသောက် (သို့) ဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်တတ်သူ၊ အဆစ်ရောင်ဆေးများ (ဥပမာcelecoxib) သောက်နေသူ (သို့) ဆီးချိုရှိသူဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ အရင်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အဆစ်ရောင်ရောဂါများအတွက် (For osteoarthritis, rheumatoid arthritis)
500 mg, ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ် သောက်ရန်
အများဆုံးပမာဏ – 1500 mg/day
ကလေးတွေအတွက် Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ယေဘူယျအသိပေးချက် – ကလေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
Glucosamine (ဂလူကိုဆာမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Glucosamineကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြား၊ သောက်ရန် – 250 mg
အမှုန့်၊ သောက်ရန် – 1.5 g
အရည်၊ သွေးပြန်ကြောထဲထိုးရန် – 400mg/ 3ml
Glucosamineကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။